Ukuqamba - Foton Motor Group Co., Ltd.
UKWENZIWA KOMHLABA WONKE
IFOTON MOTOR INDUSTRY 4.0
Uhlelo lwamazinga amabili lwe-R & D lomhlaba neBeijing njengendlunkulu, iJalimane njengesikhungo sezinto zikagesi nemishini kagesi nobuchwepheshe besikhathi esizayo kanye neJapan njengomshayeli we-R & D wezimoto zabagibeli ukwakha ikhono lobuchwepheshe lomhlaba wonke.
Amandla amasha aqhuma ekushintshaneni phakathi kobuchwepheshe nobuntu. Izikhungo ze-R & D zeFOTON eChina, eJalimane naseJapan ziqoqe onjiniyela abangu-6 500 abavela emazweni angaphezu kwama-40 futhi babona amalungelo obunikazi ayizi-5,000 e-R & D.
AMAKHONO E-R & D001
amakhono wokulingisa we-virtual
Ikhono lokuhlola ukumbumbuluzwa kwemboni okuhola phambili okubandakanya ukuphepha kokuphahlazeka, i-aerodynamics kanye nokulingisa kwe-NVH nokwenza kahle okuthuthukisa ngempumelelo isipiliyoni sokushayela imoto, ukuphepha nokwethembeka.
ISIVIVINYO SOKUPHEPHA KOKUPHEPHA
Ukuhlolwa kwamandla weCab kuhola phambili embonini.
Owokuqala oqhuba ukuhlaziywa kwe-aerodynamics CFD kanye nomhubhe womoya wezimoto eChina, kunciphisa ukumelana nomoya ngama-20% futhi konga uphethiloli we-4%.
ISIVIVINYO SOKULINGANISA NE-NVH
Indawo yokugcina ubuchwepheshe yokuhola i-NVH ehola umkhakha, ithuthukisa isipiliyoni sokushayela imoto ngokunciphisa ukudlidlizela nomsindo wezinto ezisemqoka njenge-injini, umzimba ne-chassis.
Ukuzinza kokusebenza okuhola phambili emhlabeni wonke nokushelela
Ukuthembela nokuhola phambili kwezimboni
yabantu, iloli kanye nomgwaqo
I-FOTON yethule iloli lokuqala elizimele laseChina ngo-2016. Ulwazi kwabelwana ngalo phakathi kwabantu, iloli kanye nomgwaqo wokuphepha, okunethezekile, okonga ugesi kanye nokusebenza kahle nge-IOV, idatha enkulu nokusetshenziswa kokushayela okuzimele kwe-L3. Ukukhiqizwa kweMisa kweloli elizimele kuzoqalwa ngo-2025.
I-IFOTON, umhlinzeki ohola phambili we-IOV, uxhuma abantu, imoto kanye ne-terminal ngokususelwa ku-IOV, idatha enkulu neplatifomu yamafu ukwabelana ngemininingwane yesikhathi sangempela, ukuxhumana ngokushesha nezwe nokwandisa i-R & D yemoto, ukukhiqiza, ukumaketha kanye nensizakalo ukuze inike amandla abasebenzisi ukuthola ukuhlakanipha kokusebenza nokulawula nokuxhumana okungaphezulu kokushayela imoto. I-IFOTON inikeza izixazululo ezihlangene ze-IOV ezimotweni ze-FOTON, amakhasimende avela embonini, abenzeli kanye nabaphakeli, abalingani kanye nohulumeni.
Umshwalense we-UBI Ukuzulazula okuzinikezele I-Cargo efanayo ne-Refueling inikezela nge-Refueling eseduze nophenyo olungekho emthethweni Ithrafikhi yesikhathi sangempela Eduzane nendawo yokudlela Eduzane nendawo yokupaka
ukuxilongwa kude Isici sokutakula iphutha Ukuzulazula kwemoto Isipiliyoni sokulandelela ukwebiwa kokukhunjulwa Isikhumbuzi ukutakula okuphuthumayo
Ukuthuthukiswa komkhiqizo Ukuphathwa Kokumaketha Ukuhlaziywa Kwemakethe